DC Gear Moodda iibinta, dhir sarreeya oo ah dc motor
DC Gear Moodda iibka, dhir sarreeya ee dc motor
Gaari yar oo DC Gear ah
Gawaarida DC-ga oo wata xirxiro
Maaliyadda iyo Bangiga
Worm DC gear
Ma u baahan tahay inaad la tashato?
Xageen ka heli karaa alaab tixraac?
Ka waran tayada DC Gear Motors-kaaga?
Sida loo Xulo sax ah DC Gear Motor?
Sidee loo noqon karaa wakiilkaaga?
Ma u baahan tahay inaad kala tashatid ganacsigaaga?
Soosaarka iyo Injineerka Sogears ayaa shaqeynayay tan iyo 1993, naqshadeynta iyo soo saarista warshadaha torque geared dc motor. Waxqabadka Ugu Sareeya ee Warshado Kasta. Hubinta Tayada.
Waxaan khibrad u leenahay tikniyoolajiyadda shisheeye ee horumarsan, qalabka horumarsan, kooxda maaraynta mihnadlaha oo dhammaystirtay hannaanka, laakiin si munaasib ah oo waafaqsan iso9001 / ts16949 waxay sharciyeynaysaa wax soo saarka, sidaas darteed hubinta tayada mid kasta oo ka mid ah alaabada la soo saaray.
Halkeen ka heli karaa macluumaadka shirkadaha gaarka loo leeyahay?
In kasta oo "qiima macquul ah, waqti si dhakhso leh loo gaarsiinayo" si loogu aasaaso sumcad wanaagsan macaamiisha dhexdooda, shirkaddu waxay leedahay tiro ka mid ah adeegsadayaasha guryaha iyo soosaarayaasha si ay u dhisaan xiriir adag oo u dhexeeya saadinta iyo baahida. halka 90% badeecada shirkada loo dhoofiyo gobolada mideysan, germany, japan, italy, malaysia, australia, bariga dhexe iyo wadamada kale iyo gobolada. ammaaneen isticmaaleyaasha. Marka, Haddii aad daneynaysid inaad nala shaqeyso, waxaan u diyaarin karnaa macaamiisheena dalkaaga si ay kuugu soo diraan tusaalooyin qaar oo tixraac ah ama si toos ah ayaan kuu soo diri karnaa.
Intee ayey la egtahay kooxda mashruuca?
Nidaamyadeenna wax soosaarka tayo sare leh waa dammaanad qaadidda waxqabadka aan dhammaaneynin. Shirkaddayada u hoggaansan ujeeddada maaraynta tayada koowaad, haybadda sare ee sarreeya. Waxay leeyihiin hawl qabad deggan, naqshad hoose, iyo cabbir is haysta, waxay ku shaqeeyaan wixii ka baxsan wixii laga filnayey. Dhinacyadan waxaa lagu wanaajinayaa oo keliya xulashooyinkooda sare u qaadista.
Sidee loo Doortaa Xaq Dhowr DC Gear ah?
1. Ogow shuruudahaaga dalabka.
Tallaabada ugu horreysa ee xulashada gawaarida dc gear waa dib u eegista shuruudaha dalabkaaga. Kuwaas waxaa ka mid ah laakiin aan ku xaddidnayn waxyaabaha soo socda:
Shuruudaha guud: Cabbirka baqshada, jihada kor u qaadida, nooca kor u qaadida iyo cabirka, iska-horimaadka iyo xamuulka dhinaca, iyo nooca jilcinta.
Awoodda gelinta isha: Voltage, ugboro (Hz), ugu badnaan hadda (Amps) iyo nooca kantaroolka, haddii lagu dabaqi karo.
Qeexida qalabka: Cabirka, culeyska, heerka buuqa la doonayo, heerka nolosha iyo heerka dayactirka.
Waxqabadka gearmotor: xawaaraha, torque, wareegga waajibka, xooga faraska, bilaabida iyo orodka torque (culeys buuxa).
Jawiga howlgalka: dc gear motor oo wata koodh, Codsi iyo heerkul deegaanka, iyo qiimeyn ilaalin horleh (IP).
2. Xullo dc gear ku habboon.
Marka xigta, isticmaal liistadaada shuruudaha dalabka oo isbarbar dhig tafaasiisha gawaarida ee noocyada kala duwan ee aad xiiseyneyso sida caalami ahaan, caday la'aan ama qalab magnet joogto ah. Bacdamaa arji kastaa leeyahay astaamo u gaar ah iyo shuruudo u gaar ah, waxaa muhiim ah in la ogaado qodobka ay ka mid yihiin xoojinta faraska, billowga kartida ama hufnaanta ugu muhiimsan dalabkaaga. Inta lagu gudajiro marxaladan, waxaad go'aansan kartaa in isku aadinta sanduuqa gear iyo mooto ay si gaar ah u waafaqaan baahiyahaaga.
3. Ogow xawaaraha iyo shuruudaha torque ee culayska la saarayo.
Si loo hubiyo in qalabkaaga qalabkaaga uu si sax ah u cabbiro dalabkaaga, waxaa muhiim ah in la ogaado xawaaraha wax soo saarkaaga, tusaale ahaan dc gear motor 100 rpm, bilawga iyo orodka qulqulka. Xulashada qalabka ku habboon ayaa ah arrin la mid ah xawaaraha soosaarka (RPM) iyo u qulqulka baahiyahaaga dalabka. Xawaaraha soosaarka waxaa go'aamiya shuruudaha makiinadaada waana in horay loo sii ogaado. Taasi waxay ka dhigeysaa bilowga iyo socodsiinta halgan si loo go'aamiyo. Maskaxda ku hay, markii aad doorato qalabka mishiinka mashiinka-horay loo soo saaray, soo-saaraha ayaa sameeyay inta badan qaadista culus si loo hubiyo in mootada iyo sanduuqa gear ay si aan kala go 'lahayn u shaqeyn doonaan.
Markaad xisaabiso bilicdaada bilaabida iyo socodka, u adeegso qalooca waxqabadka soo saaraha ee torque, xawaaraha iyo hufnaanta si aad uhesho matoor ku habboon baahiyahaaga. Kadib dib u eegida xaddidaadaha naqshada ee ay ka mid yihiin orodka (buuxa-) gantaalka gearbox, xawaaraha gelinta, xoog abuurka gearbox, astaamaha kuleylka iyo wareegyada waajibaadka.
Mar alla markii aad doorato qalabka loo yaqaan 'gearmotor', waxaa muhiim ah in la sameeyo dhowr tijaabo si loo hubiyo in matoorku si fiican ugu socdo jawiga caadiga ah ee shaqada. Haddii matoorku si aan macquul ahayn u kululaado, buuq badan yahay, ama uu u muuqdo walaac, ku celi hannaanka xulashada matoorka ama la xiriir soo-saaraha.
Waqtiga aad ku qaadaneyso inaad si sax ah u cabbirto qalabkaaga wuxuu gacan ka geysan doonaa hubinta inay sii socon doonto sanadaha una shaqeyneyso waxtarka ugu sarreeya.
Xagee ka heli karaa Dhaqaalaha?
Fadlan u dir dhammaan macluumaadkaaga emaylkeena [emailka waa la ilaaliyay] waxaana loo gudbin doonaa maamulkeena. Iyagu way arki doonaan oo waxay ku siin doonaan jawaab-celintaada. Ka dibna, waa inaanu kulannaa midkastoo si aan uga sii hadalno.
Nala soo xiriir maanta oo hel kanaga koowaad